kidoro lateks - Rayson
Eo amin'ny toerana mety ianao kidoro lateks.Amin'izao fotoana izao dia efa fantatrao fa, na inona na inona tadiavinao, dia azonao antoka fa hahita izany ianao Rayson.manome toky izahay fa eto io Rayson.
Ny vokatra dia miha malaza sy manana fampiharana isan-karazany..
Izahay dia mikendry ny hanome ny kalitao avo indrindra kidoro lateks.ho an'ny mpanjifa maharitra ary hiara-hiasa amin'ny mpanjifanay izahay hanolotra vahaolana mahomby sy tombony amin'ny vidiny.
Shina mora indrindra manamboatra boninkazo vita amin'ny bonnell spring-Rayson
Rayson ao amin'ny Rayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Ireo vokatra lehibe any Shina dia mora manamboatra boninkazo vita amin'ny bonnell spring-. kamory vita amin'ny lohataona bonnell mandavantaona Ny kalitaon'ny vokatra sy serivisy no fomba fiaina an'ny mpanamboatra Rayson Spring Mattress Manufacturing. Ny vokatra dia manana kalitao tsara sy azo itokisana. kasety mateviana bonnell lohataona Rayson dia manamboatra milina CNC. Ireo fandaharana ho an'ny milina CNC dia namboarina mialoha amin'ireo manampahaizana manokana momba ny CAD / CAM miasa amin'ireo fitaovana farany.